Hargeysa: Dhallinyaro La Barey Xirfadda Feedhka Oo Xaflad Loo Qabtey
You are here: Home somal Hargeysa: Dhallinyaro La Barey Xirfadda Feedhka Oo Xaflad Loo Qabtey
Machadka jidh dhiska, Jimicsiga iyo barashada xirfadda feedhka oo ku yaalla Magaalada Hargeysa ayaa shalay xaflad u qabtey 9 dhallinyaro ah oo la baray xirfadda feedhka.
Dhallinyaradan oo muddo baranayey feedhka iyo hababka kala duwan ee la isku difaaco karo, ayaa waxa xafladda loo qabtey ka qayb-galay Masuuliyiin ka socday laamaha dawladda Somaliland, sida Golaha deegaanka Hargeysa iyo xubno kale oo muhiim ahaa.
Xafladda loo qabtey qallin-jabinta dhallinyarada feedhka la baray oo sidoo kale ay barbar socotay soo gabogabeynta tartan dhanka feedhka ah oo iyaga loo dhex marey, ayaa waxa hadallo ka jeediyay Masuuliyiintii ka qayb-galay iyo Maamulka Machadka Bilkhayr GYM.
Xildhibaan Xasan Cabdi Cali (Xasan Shahar) oo ka socday golaha deegaanka ee Caasimadda Hargeysa oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay Machadka Tababarkan bixiyey ku amaanay shaqada uu u hayo guud ahaan shacabka Somaliland, gaar ahaan dhallinyarada ku dhaqan Hargeysa, siiba kuwooda xiiseeya jidh-dhiska iyo xirfadaha feedhku ka mid yahay. Waxaanu Maamulka Machadkaasi ku daraadaarey inay halkaasi ka sii wadaan isla-markaana aanay ka daalin hawshoodan oo ku macneeyay mid loo baahan yahay yar iyo weynba.
Munaasibaddaasi oo sidoo kale ka hadleen Masuuliyiin kale oo door ah, ayaa waxa gabogabadii ka hadlay Mulkiilaha Machadka Bilkhayr GYM, Siciid Ismaaciil Geeddi, waxaanu si kooban uga hadlay Taariikhda Machadkaasi iyo mudada uu shaqeynayey. Siciid wuxuu sheegay in Machadka ay hirgeliyeen sanadkii 2007-dii, ilaa wakhtigaana ay ka qallin-jabiyeen dhowr dufcadood oo bartay xirfado badan, kuwaasi oo uu feedhku ka mid yahay “Taariikhda GMY-ka Bilkheyr waxaanu bilawnay 2007, mana aha dufcaddii ugu horeysay ee ka barata xirfadda feedhka, laakiin waxa jiray dufcado ka horeeyay, hasa-yeeshee dhalinyaradan ayaa ah kuwii ugu horeeyay ee aanu u qabano tartan feedhka ah oo iyaga dhex mara..” ayuu yidhi, Mulkiilaha Machadkaasi, Siciid Ismaaciil Geeddi.